Hadda la heli karo dalabka cusub ee Apple TV Remote | Wararka IPhone
Hada waxaad kaheli kartaa barnaamijka cusub ee Apple TV Remote, oo ah Siri Remote oo kujira iPhone-kaaga
Pablo Aparicio | | Barnaamijyada IPhone, Apple tv
Dhowr bilood ka hor, Eddy Cue iyo Craig Federighi ayaa ka hadlay wararka Apple wareysi ballaaran. Wareysigaas waxay heleen waqti ay kaga hadlaan jiilka afraad ee Apple TV iyo codsi aad u awood badan oo Remote ah oo noo ogolaanaya inaan kaga tagno Siri Remote khaanad oo aan ku isticmaalno dhamaan shaqooyinkiisa iPhone, iPod Touch. ama iPad, laakiin maahan iPad-ka. Abkaas hadda la heli karo magacaaguna waa Faransiiska Apple Remote.
Abka oo markii hore loogu yeeri jiray "Remote" ayaa hada loo yaqaan "iTunes Remote," sidaa darteed mar dambe la jaanqaadi maayo jiilka afraad ee Apple TV ee cusbooneysiinta mustaqbalka ama wuxuu sii wadi doonaa inuu noqdo mid xadidan sida ay hadda tahay . Codsigaas ayaa noo oggolaaday inaan ku wareejino is-dhexgalka tvOS, laakiin uma isticmaali karin inaan ku ciyaarno ama ku ciyaarno wax ka weydii Siri. Taasi waa wax aan ku qaban karno barnaamijka cusub ee Apple TV Remote.
Tilmaamaha Apple TV Remote
Farahaaga ku soo mari Apple TV.
Si dhakhso leh ugu qoro qoraalka, cinwaanada emaylka iyo ereyada sirta ah kumbuyuutarka.
Weydiiso Siri inay hesho wax ay caadi tahay in la daawado, la maqlo, ama la ciyaaro.
Xakamee looxanka filimka, showga TV, ama heesta aad daawaneysid ama dhageysaneysid.
Isticmaal aaladda loo yaqaan 'accelerometer' iyo 'gyroscope' si aad ugu ciyaarto ciyaaro fiidiyow ah.
Ku dhaqaaji habka ciyaarta si aad u xakameyso xakamaynta ciyaarta.
Laga soo bilaabo wixii aan awooday inaan ku tijaabiyo (wax yar), Apple TV Remote ayay tahay fudud in lala socdo tvOS menus, wax ay badhanka Menu-ka iyo Guryuhu gacan ka geystaan. Weydiinta Siri wax waliba sifiican ayey u shaqeysaa sidoo kale, laakiin waa inaan maanka ku haynaa in makarafoonka iPhone-ka uu ku yaal qeybta hoose ee taleefanka, oo uusan aheyn korka sida Siri Remote. Marka la soo koobo, waxaan la kulannaa codsi dhigaya Siri Remote on our iPhone ama iPod. Su'aashaydu waxay tahay: miyaanay ku dari karin shaqadan dalabka Fog ee durba la heli karay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Hada waxaad kaheli kartaa barnaamijka cusub ee Apple TV Remote, oo ah Siri Remote oo kujira iPhone-kaaga
Sida loo xisaabiyo cabirka shay leh kamarada iPhone-ka
iTunes 12.4.3 ayaa timid si loo xaliyo dhibaatooyinka liisaska macruufka ah